Momba anay - Shenzhen Simida Intelligent Equipment Co., Ltd.
Niorina tamin'ny taona 2008, Smida dia orinasa teknolojia avo lenta integral R&D consultation R&D, famokarana, varotra ary serivisy aorian'ny fivarotana. Nahazo mari-pahaizana fisoratana anarana amin'ny marika Sinoa sy Anglisy i Smida ary nahazo alalana tamin'ny fanafarana entana sy fanondranana.
Ny mpikambana ao amin'ny ekipanay dia samy manana ny traikefa nandritra ny folo taona mahery. Ny iraka ataontsika dia ny ho tonga mpanamboatra fitaovana tena tsara amin'ny alàlan'ny fihazonana ny fitsipiky ny «famolavolana metimety sy ny conscientiousmanufaktur», ary hamorona lanja ho an'ny mpanjifantsika miaraka amin'ny vokatra avo lenta sy tolotra matihanina mifototra amin'ny fiaraha-miasa mandresy. Miasa amin'ny ezaka rehetra ataontsika, miangavy anao hanome ny mpanjifanay serivisy maharitra.
Mandritra izany fotoana izany dia mitazona ny kalitaon'ny vokatra ho soatoavinay lehibe izahay. Mino izahay fa ny orinasam-pamokarana lehibe dia hibahan-toerana amin'ny sehatry ny famokarana amin'ny ho avy ary ny orinasa toy izany dia hitombo hatrany hatrany amin'ny automatisation mba hanomezana izay ilain'ny famokarana. Rehefa mihamaro ny orinasa mampiasa fitaovana, dia hanjary tena zava-dehibe ny fahamarinan-toerana. Ao amin'ny Smida, raisinay ho adidintsika ny famolavolana fitaovana miaraka amin'ny fahamarinan-toerana avo lenta sy ny fandidiana mora entina mahafeno ny fepetra takian'ny mpamorona mahay.
Satria efa nozahana toetra ny fitaovanay, novidiana tamin'ny volabe, ary ampiasain'ny orinasa lehibe isan-karazany mandritra ny fotoana maharitra, dia matoky izahay fa afaka mahafeno ny fepetra takianao amin'ny fitaovana tsara kalitao. Safidio izahay, dia hahazo matihanina sy milamina ny saina! Manantena ny hihaino anao izahay, â € ¦